भुलेर पनि यो दिन पैसा सापटी नदिनुहोस, किन ? यस्तो छ कारण ! – nepalonlinekhabar
के तपाई आर्थिक समस्याबाट चिन्तित हुनुहुन्छ ? अनावश्यक खर्चका कारण पैसा बचाउन सकिरहेको छैन भने बिहीबारको दिन यसो गर्नुहोस।ज्योतिष शास्त्रअनुसार बिहिबारलाई गुरुबार पनि भन्ने गरिन्छ। जुन व्यक्तिलाई गुरुको कृपा हुन्छ त्यसलाई कहिले पनि पैसाको कमि हुदैन।बिहीबारको दिन सूर्योदय हुनु अगावै स्नान गर्नुहोस र घी को दीप बालेर भगवान बिष्णुको पुजा आर्चना गर्नुहोस। साँझको समयमा केराको बोटमा दीपक जलाएर बेसनको मिठाई चढाउनुहोस् र प्रसाद स्वरुप अरुलाई पनि बढ्नुहोस। बिहिबारको दिन भगवानको पुजा सकेपछि
केसरको तिलक लगाउनुहोस।
बिहीबारको दिन कसैले पैसा मग्न आएमा नदिनुहोस्। बिहीबारको दिन पैसाको लेनदेन गर्दा तपाइको गुरु कमजोर हुन्छ। यसबाट तपाइको आर्थिक समस्या पैदा हुन्छ। यदि बिहीबारको दिन पैसा दिएमा फिर्ता आउदैन । बिहीबारको दिन गुरु, माता -पिताको आशिर्बाद लिनु राम्रो हुन्छ। उहाहरुलाई उपहारको रुपमा पहेलो रङको बस्त्र दिनु शुभ मानिन्छ। एजेन्सीको सहयोगमा
मेहन गरे कसले सक्दैन : दृष्टिविहीन लोकेशले ल्याए एसईईमा उत्कृष्ट नतिजा
यी हुन् एसईईमा नेपाल टप गर्ने बेनीका प्रशान्त सुवेदी
रेनकोट लगाएर पढाउछन् शिक्षक ,छाता ओढेर पढ्न बाध्य छन् बिद्यार्थी !